२० दिनदेखि बे’पत्ता पूजाकी आमाको अवस्था ग’म्भीर : एक युवाले ‘फेक’ आइडी बनाएर थप पी’डा दिदै ! प्रहरी प्रति परिवारको गु’नासो – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/२० दिनदेखि बे’पत्ता पूजाकी आमाको अवस्था ग’म्भीर : एक युवाले ‘फेक’ आइडी बनाएर थप पी’डा दिदै ! प्रहरी प्रति परिवारको गु’नासो
२० दिनदेखि बे’पत्ता पूजाकी आमाको अवस्था ग’म्भीर : एक युवाले ‘फेक’ आइडी बनाएर थप पी’डा दिदै ! प्रहरी प्रति परिवारको गु’नासो
गुल्मी । छोरी बे’पत्ता भएको दिनदेखि बि’रामी आमाको अवस्था ना’जुक बन्दै गएको छ । तर तिनै बे’पत्ता छोरीको एक युवाले फेक आइडी बनाएर थप पी’डा थपिदिएका छन् ।
घ’टना हो, गुल्मीको ईस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर–५ रजस्थल दोबाटाको । त्यस गाउँकी १७ वर्षीया पूजा अर्याल मङ्सिर १ गते विहान सदरमुकाम तम्घासमा जाडोमा लगाउने कपडा किन्छु भन्दै घरबाट हिँडेकी थिइन् । उनी हिँडैकै दिन तम्घासको भगवती मन्दिरसम्म पुगेको एक जना छिमेकीले देखेको बताएका छन् । त्यसपछि उनको अवस्था अज्ञात छ ।
तर, उनै युवतीका नाममा एक जना युवाले फेसबुक आईडी बनाएर अनेकन लेख्दै पी’डा दिने गरेको परिवारका सदस्यहरुले बताएका छन् । जसले कहिले भारतमा छु भन्ने त कहिले पूजा आर्याल नामकै आईडीबाट म जीवन र म’रणको दोसाँधमा छु भनेर लेख्ने गरेका छन् ।
उक्त आइडीबाट पूजाका बाबु नारायणप्रसादले अनेकन म्यासेजहरु आउने गरेको बताए । खोजतलासका लागि प्रहरीमा उ’जुरी दिएको यतिका दिन बित्दा पनि प्रहरीले खासै वास्ता नगरेको गु’नासो परिवारजनको छ । यस सम्वन्धमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी राजेन्द्र सिंह खड्काले आफूहरुले खोज तलासका लागि प्रयास भइरहेको बताए ।
पोखरामा जमिनको धाँजा फाट्यो, जोखिमपूर्ण बन्दै पोखरा (३ तस्विर सहित)
नेपालमा क्षेप्या’स्त्र प्रणाली नै जडान गर्ने गरेर चीनलाई निशाना बनाउने देखेपछि मैले एमसीसी रोकेको हुँ : महरा